ukhona lapha: Ikhaya amathiphu Indlela ukukhetha qapha?
Kuleli zwe lanamuhla, alas, Ngokuvamile ezihlukahlukene ukuze uzivikele nabathandekayo bakho emisebeni ezingadingekile. Kodwa kunzima impela, ngoba lezi ray ezingabonakali futhi imperceptible. Ukuba khona umsebenzi endaweni ezifuywayo ezingaba kuphela abendlu dosimeter.
On the izingozi empilweni, okuyinto angase abhekane ukuhlala njalo endaweni imisebe high, uyesaba ukukhuluma. Ngakho kungcono kufanele uzivikele kanjani wena nomkhaya wakho kuwo.
Dosimeter ekhaya - idivayisi sasivumela elula, Powered by Geiger counter. Kukala ngemisebe okwathatha isikhathi eside emoyeni ingemuva, imikhiqizo, izihloko ezahlukene. Idatha Akhe linembile kakhulu, kodwa ukuyisebenzisa ekhaya kwanele. Ngaphezu kwalokho, kuyinto ehluke ngokuphelele elula ukuyiqonda umuntu ongelutho-.
Yini okufanele sinake, ngiphakamisa dosimeter nendlu?
Wena kumele acace, Ukusebenzisa lisebenze.
Phawula inani kanye nezinhlobo izinzwa. It kuxhomeke kudivayisi uzwela.
Umkhiqizo kumele sihambisane nesitifiketi ezifanele of quality.
Idivayisi kumele kube icwecwe futhi kuwusizo, ngakho ungathatha it nabo ngaphandle kwezinkinga.
Imisebenzi ozikhethela Iyatholakala, okuzokwenza kube lula isilinganiso.
Dosimeter ekhaya ilula ngempela ukusebenza, kulula ukufunda ukuyisebenzisa.
Nakani, ingasetshenziswa ngezinhloso enjalo:
Nesilinganiso emisebe ye background of ekamelweni noma emgwaqweni;
ihlola ukutholakala izakhi radioactive ukudla;
hlola for ukukhishwa kwemisebe radioactive kusuka kunoma iyiphi into.
ngaphambi, uqala ucwaningo, Sidinga ukukhumbula, ukuthi imvelo ekhona ngemisebe okwathatha isikhathi eside ingemuva yemvelo, which is dingeka! nabangenacala empilweni. Kodwa ngokweqile layo okuthwala imiphumela eziyinkimbinkimbi.
Ukuze sihlole ezingeni radioactivity usebenzisa dosimeter yasendlini, kumele:
Vula kudivayisi. Setha kabusha umthamo ucwaningo olusha, uma kunesidingo.
Uma ufuna ukuhlola evulekile (street, inkantolo, iyiphi indawo), landela, ukuze idivayisi is hhayi singcoliswe. Uma isayithi test - ekamelweni, nocwaningo eziningana izindawo zalo - close to the izindonga, Central, uphahla.
Uma ufuna ukuhlola into noma ukudla umkhiqizo, Bamba idivayisi eduze ngangokunokwenzeka kulo. Ungakwazi afeze lezi izilinganiso ngqo esitolo noma emakethe, ngaphambi ukuthengwa kungenzeka: kungcono fast and kuba impela elula.
into encane kangaka uzoba umsizi esisemqoka.
Uye wavikela impilo yabo nabathandekayo babo.